Umkhiqizi kanye Nomhlinzeki We-Side Side Wholesale I-CCMIE
Umsebenzi: ukuphatha ngokuphepha iziqukathi zokuthumela neminye imithwalo kusuka / kwamanye amaloli
Kukalwe umthamo: 37 ton
Ubukhulu Sekukonke: 14100mm x 2500mm x 4100mm
Ezokuthutha: 20ft, 40ft iziqukathi
Oluvala amasondo: 3 izimbazo, 13T Fuwa
ITire: 12R22.5, 315 / 80R22.5, 11.00R20
Izimpahla zokufika: JOST brand
Uhlelo lwe-Brake: WABCO
Uhlelo lukagesi: 24V, amalambu e-LED, 7-pin Socket (ye-7 wire harness)
I-CCMIE 45T ton Container Side Loader Trailer yenziwa eXuzhou, le modeli yakhiqizwa kusukela ngo-2019, futhi ifakwe isilawuli esikude esingenantambo somkhiqizo nokusebenza ngesandla. I-CCMIE ikhiqiza i-Container Side Loader Trailer engamathani angama-45 ukulayishwa nokwehlisa ukusebenza. Ingalayisha futhi ithumele isitsha esingu-40ft, isitsha esingu-20ft esinamathani angama-45 wokuphakamisa amandla.
I-CCMIE 20ft 40ft container side Loader trailer enekhono eliphakeme lokuphakamisa kanye nezindleko ezisebenza kahle zokuphakamisa nokuhambisa imishini. I-CCMIE ihlinzeka nge-40ft container loader eseceleni ukuhlangabezana nazo zonke izidingo zokuphatha iziqukathi, ukuhambisa isitsha se-20ft, 40ft 40HQ.
I-CCMIE Container side Loader yenze umsebenzi waguquguquka, Wonga isikhathi futhi uthuthukise umkhiqizo wamakhasimende anelisekile emhlabeni jikelele. I-CCMIE Ikhiqiza i-container side loader trailer yokuphakamisa nokuthutha iziqukathi. Futhi sisebenzisa ubuchwepheshe obunokwethenjelwa, obuphumelelayo nobuphephile.
Ngokwesakhiwo sefreyimu, ukwakhiwa kwe-welding basebenzisa insimbi ephezulu yokumelana Futhi i-CCMIE isitsha sezokuthutha ohlangothini lwe-trailer semi-trailer sisebenzisa umqondo wokuklama osezingeni eliphakeme.
Thina kwa-CCMIE sihlinzeka abathengi bethu abangase babe khona abavela kuwo wonke umhlaba ngezindawo ezisezingeni eliphakeme ezisezingeni eliphezulu ze-Lifters kanye nabaphakeli abasezingeni lokuqala be-Side Lifter. Ukuba ngumkhiqizi okhokhelwayo kulo mkhakha, manje sesithole ulwazi oluningi kakhulu olusebenzayo ekukhiqizweni nasekulawulweni kwe-China Side lifter Container Trailer 40 ethengiswayo, futhi sithole ulwazi lobuchwepheshe oluhle kakhulu, sikholwa ukuthi Lokhu kusenza sigqame emncintiswaneni futhi kuvumela amakhasimende ukuthi akhethe futhi asithembe. Sonke sithemba ukudala amadili wokuwina namakhasimende ethu, ngakho-ke sishayele namuhla futhi wenze abangane abasha!
Ethengisa kakhulu eChina Side ophakamisa, Side Loader, iminyaka eminingi kangaka, sihlale banamathela isimiso amakhasimende-ngamakhasimende, izinga-based, ukuphishekela ubuhle nokuzuza mutual. Siyethemba ukuthi, ngobuqotho obukhulu nokuzimisela okuhle, sizohlonishwa ukukusiza emakethe eqhubekayo.
hlola ohlangothini ophakamisa uhlelo lokubacindezela njalo ngenyanga
Hlanza indawo yokusebenza kwe-valve
Gcina uwoyela wokubacindezela ungenalo uthuli, gcwalisa uwoyela wokubacindezela njalo ezinyangeni ezi-4 kuye kweziyi-6., Kufake esikhundleni saso uma uthola ukuthi kunoshubile, into engcolile nokunye okungavamile, nethangi likawoyela elihlanzekile, shintsha uwoyela wokubacindezela njalo ngonyaka
Bheka ukugqokwa kwama-slide pads, ukubuyisele uma kunesidingo
Hlola uwoyela wokubacindezela nsuku zonke, ungeze uma kunesidingo
Bheka ipayipi le-hydraulic, i-tube joint ne-cylinder, uma uwoyela uvuza, qinisa amalunga noma ubeke ezinye izimvu zamanzi uma kutholakala uwoyela ovuzayo
Hlanza noma buyisela isihlungi sikawoyela umfutho ophakeme bese ubuyisela isihlungi samafutha njalo ezinyangeni eziyisithupha, susa ipulagi kawoyela, ukhiphe uwoyela, bese ususa igobolondo, hlanza noma ufake isihlungi
Langaphambilini Side Phakamisa Crane
Olandelayo: I-Side Loader Trailer
Isitsha Finyelela Isitaki-ZHRS4531-5
Isitsha Forklift Truck